MUSIYANO URIPO PAKATI PEHOTMAIL.COM, MSN.COM, LIVE.COM & OUTLOOK.COM? - NYORO
Musiyano uripo pakati peHotmail.com, Msn.com, Live.com & Outlook.com?
Ndeupi musiyano uripo pakati peHotmail.com, Msn.com, Live.com & Outlook.com?
Wakavhiringidzika pakati peHotmail.com, Msn.com, Live.com, uye Outlook.com? Kufungisisa zvavari uye kuti vakasiyana sei kubva kune mumwe nemumwe? Zvakanaka, wakamboedza kusvika www.ndira.com ? Kana iwe ukadaro, iwe ungadai wakaendeswa kune iyo Outlook yekupinda-peji peji. Izvi zvinodaro nekuti Hotmail, muchokwadi, yakadzoserwa kuOptlook. Saka chaizvo, Hotmail.com, Msn.com, Live.com, uye Outlook.com zvese zvinongedzera, zvakanyanya kana zvishoma, zvakafanana webmail sevhisi. Kubva Microsoft payakawana Hotmail, yanga ichitumidza zita rebasa nguva nenguva, zvichinyonganisa vese vashandisi vayo. Heano maitiro ekufamba kubva kuHotmail kuenda kuAptlook.
OUTLOOK.COM, OUTLOOK MAIL Uye (HOFISI) OUTLOOK
WEBHU EMAIL CLIENT
DESKTOP EMAIL Mutengi
Imwe yekutanga webmail sevhisi, inozivikanwa seHotmail, yakavambwa uye yakavhurwa muna1996. Hotmail yakagadzirwa uye yakagadzirirwa kushandisa HTML (HyperText Markup Mutauro) uye, nekudaro, pakutanga yaive yakatemwa seHoTMaiL (ona mavara makuru). Iyo yaibvumidza vashandisi kuwana yavo inbox kubva chero kupi uye nekudaro vakasunungura vashandisi kubva kuIP-based email. Yakave yakakurumbira mukati megore chete rekuburitswa kwayo.
Microsoft yakawana Hotmail muna 1997 ndokubatanidzwa mumasevhisi einternet eMicrosoft, anozivikanwa seMSN (Microsoft Network). Ipapo, Hotmail yakapihwa zita zvakare seMSN Hotmail, ichiri ichizivikanwa seHotmail pachayo. Microsoft yakazoibatanidza neMicrosoft Passport (ikozvino Akaundi yeMicrosoft ) uye nekuwedzera kuiisa pamwe nemamwe masevhisi pasi peMSN seMSN messenger (kutumira mameseji ipapo) uye nzvimbo dzeMSN.
Muna 2005-2006, Microsoft yakazivisa zita nyowani rechiratidzo kune mazhinji masevhisi eMSN, kureva, Windows Live. Microsoft pakutanga yakaronga kutumidza zita rekuti MSN Hotmail kuWindows Live Mail asi bvunzo dze beta dzakada zita rinozivikanwa Hotmail. Nekuda kweizvi, MSN Hotmail yakava Windows Live Hotmail pakati pemamwe mazita eMSN services. Iyo sevhisi yakanangana nekuvandudza kumhanya, kuwedzera nzvimbo yekuchengetera, zvirinani mushandisi ruzivo uye mashandisiro maficha. Gare gare, Hotmail yakagadzirwazve kuwedzera zvimwe zvitsva senge Zvikamu, Instant Zviito, zvakarongwa Tsvaira, nezvimwe.
Kubva ipapo, iyo MSN brand yakachinja yayo yekutanga kutarisa kune zvemukati zvemukati senge nhau, mamiriro ekunze, mitambo, uye varaidzo, iyo yakaitwa kuti iwanikwe kuburikidza neayo webhu portal msn.com uye Windows Live yakafukidza ese ese eInternet masevhisi masevhisi. Vashandisi vekare avo vasina kuvandudza kune ino sevhisi nyowani vanogona vachiri kuwana iyo MSN Hotmail interface.
Muna 2012, iyo Windows Live brand yakamiswa. Mamwe emasevhisi akadzoreredzwa akazvimirira uye mamwe akabatanidzwa muWindows OS semapurogiramu nemasevhisi. Kusvika pari zvino, iyo webmail sevhisi, kunyangwe yakatumidzwa zita kashoma, yaizivikanwa seHotmail asi mushure mekumiswa kweWindows Live, Hotmail yakazopedzisira yave Outlook. Iko kutaridzika izita iro Microsoft webmail iri sevhisi inozivikanwa nhasi.
Iye zvino, outlook.com ndiyo yepamutemo webmail sevhisi iyo iwe yaunogona kushandisa kune chero ako eemail email email, ingave outlook.com email kana iyo yakamboshandiswa Hotmail.com, msn.com kana live.com. Ziva kuti nepo iwe uchiri kukwanisa kuwana ako ekare maakaunzi maemail paHotmail.com, Live.com, kana Msn.com, iwo maaccount matsva anogona kungogadzirwa chete seexlook.com maakaundi.
Saka, iyi yaive nzira Hotmail yakachinja kuita MSN Hotmail, ndokuzoenda kuWindows Live Hotmail uyezve pakupedzisira kuAptlook. Zvese izvi zvekumiswazve uye kutumidzwazve zita neMicrosoft zvakakonzera nyonganiso pakati pevashandisi. Zvino, kuti isu tine Hotmail.com, Msn.com, Live.com, uye Outlook.com zvese zvakajeka, kuchine imwezve nyonganiso yasara. Chii chaizvo chatinoreva kana tichiti Outlook? Pakutanga patakati Hotmail, vamwe vaiziva zvatiri kutaura nezvazvo asi ikozvino mushure mezvese izvi zvakare kutumidza zita zita, tinoona zvakawanda zvakasiyana zvigadzirwa kana masevhisi akabatanidzwa kune rakajairika zita 'Outlook'.
Tisati taenderera mberi nekunzwisisa kuti Outlook.com, Outlook Mail neAptlook zvakasiyana sei, tichatanga tataura nezvezvinhu zviviri zvakasiyana zvachose: Webhusaiti yeemail mutengi (kana webhu app) uye Desktop email mutengi. Idzi ndidzo nzira mbiri dzinogoneka dzaungagone kuwana maemail ako.
Iwe unoshandisa yewebhu email mutengi chero iwe paunopinda iwe kuemail account yako pawebhu webhu (seChannel, Firefox, Internet Explorer, nezvimwe). Semuenzaniso, iwe unopinda muakaunti yako pane outlook.com pane chero ewebhu mabhurawuza. Iwe haudi chaiyo chirongwa chekuwana maemail ako kuburikidza newebhu email mutengi. Zvese zvaunoda mudziyo (senge komputa yako kana laptop) uye neinternet yekubatanidza. Ziva kuti kana iwe ukawana yako maemail kuburikidza newebhu browser pane yako nharembozha, urikushandisa zvakare webhu email mutengi.
Kune rimwe divi, urikushandisa desktop email mutengi paunotanga chirongwa chekuwana maemail ako. Unogona kunge uri kushandisa chirongwa ichi pakombuta yako kana kana nharembozha yako (pakadai iri mbozhanhare yekushandisa). Mune mamwe mazwi, chirongwa chaicho chaunoshandisa kunyanya kuwana yako email account yako desktop desktop email.
Zvino, iwe unofanirwa kunge uchishamisika kuti sei tiri kutaura pamusoro pemhando mbiri idzi dzevatengi veemail. Chaizvoizvo, izvi ndizvo zvinosiyanisa pakati peOptlook.com, Outlook Mail uye Outlook. Kutanga neAptlook.com, inonyatso kureva kune yazvino Microsoft webhu mutengi email, iyo pakutanga yaive Hotmail.com. Muna 2015, Microsoft yakaparura Outlook Web App (kana OWA), iyo yava ‘Outlook pawebhu’ sechikamu cheHofisi 365. Yaisanganisira masevhisi mana anotevera: Outlook Mail, Outlook Calendar, Outlook People uye Outlook Tasks. Kunze kweizvi, Outlook Mail ndiyo yewebhu email mutengi waunoshandisa kuwana maemail ako. Unogona kuishandisa kana iwe wakanyorera kuOfisi 365 kana kana iwe uchikwanisa kuwana Exchange Server. Outlook Mail, mune mamwe mazwi, ndiyo inotsiva iyo Hotmail interface yawakamboshandisa pakutanga. Chekupedzisira, desktop yemicrosoft email desktop inonzi Outlook kana Microsoft Outlook kana dzimwe nguva, Office Outlook. Icho chikamu cheMicrosoft Outlook kubvira Hofisi 95 uye inosanganisira maficha senge khalendari, maneja maneja uye manejimendi manejimendi. Ziva kuti Microsoft Outlook inowanikwawo nenharembozha uye mapiritsi ane Android kana iOS masisitimu anoshanda uye neshanduro shoma dzeWindows foni.
Saka ndizvozvo. Tinotarisira kuti nyonganiso yako yese ine chekuita neHotmail neAptlook zvagadziriswa zvino uye une zvese zvakajeka.
windows 10 haizovhara inotangazve
windows alt tab isiri kushanda
angu windows 10 kusimudzira kwakanamatira pa 99
windows kugadzirisa kutarisa kwemaawa
windows 10 mbeva nekhibhodi mira kushanda
windows 10 chituko nhema nhema